10 Kuhle Theme Amapaki EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Kuhle Theme Amapaki EYurophu
Isikhathi sokufunda: 8 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 08/01/2021)
Olunye lweholide lomndeni elijabulisa kakhulu lizoqhubeka nohambo olujabulisayo luye kwelinye lamapaki wetimu amahle kakhulu eYurophu. EFrance kuphela, uzoba 3 amapaki wetimu amangalisayo, futhi sikhethe ngesandla i- 10 amapaki wetimu amahle kakhulu eYurophu ohambweni lwakho lomndeni olulandelayo. Ukugibela okungcono kakhulu kwe-rollercoaster emhlabeni, amahlathi enchanted, amazwe omlingo, Fairies, nokuheha okuhamba isikhathi, zikulindile, kusuka eFrance kuya e-Austria nase-UK.
1. I-Europa-Park eRust eJalimane
Ipaki enkulu yetimu eJalimane, Ipaki yetimu ye-Europa inokuningi kunoku 100 ezikhangayo. I-Europa-Park iyipaki lesibili elidume kakhulu eYurophu, ngemuva kweDisneyland eParis. Uma izingane zakho zithanda ama-rollercoasters, lapho-ke bazoqhuma ku 13 ama-rollercoasters epaki.
Uma uhlela uhambo oluya eStrasbourg, lapho-ke kufanele uhlele okungenani 2 izinsuku ze-Europa-Park. This is due to the number of exciting attractions already mentioned, nemibukiso eyengeziwe emnandi. The youngest will enjoy an enchanting elf ride, kanye nesifunda seBig-Bobby-Car sabafisa ukuba ngabashayeli bomjaho, ngenkathi izingane ezindala nabazali bezoshaywa umoya ku-Blue Fire Mega coaster ezweni lase-Iceland.
Ngaphezu kwalokho, uma ngabe uhlela ukuvakasha okude, lapho-ke ungahlala kwelinye lamahhotela asesizeni. Ngale ndlela ungasebenzisa kakhulu ukuvakasha kwakho eYurophu-Park, futhi uzwe zonke izindawo ezinezihloko: Kusuka e-Adventureland e-Afrika kuya ehlathini lase-Grimm’s Enchanted.
Ungafika Kanjani E-Europa-Park?
I-Europa-Park imayelana 3 amahora ukusuka eFrankfurt, futhi ungakufinyelela nge travel isitimela inqamula iJalimane iye eRingsheim. Khona-ke, ungaqasha imoto noma ukudluliswa kwebhasi.
ICologne iya eFrankfurt Ngesitimela
EMunich iya eFrankfurt Ngesitimela
IHanover eya eFrankfurt Ngesitimela
2. IDisneyland Paris France
Kungenzeka ukuthi iyipaki yetimu edume kunayo yethu 10 amapaki wetimu amahle kakhulu ohlwini lwaseYurophu, Disneyland Paris iyintandokazi phakathi kwabavakashi bayo yonke iminyaka. Abalingiswa abathandekayo abavela ezindabeni zethu eziyizintandokazi ze-Disney ngaso sonke isikhathi, ukuheha izigidi zezivakashi minyaka yonke.
IDisneyland isedolobheni laseChessy, eFrance. Kuyikhaya lesitudiyo iWalt Disney nepaki ekhangayo, lapho ungangena enganekwaneni, nawo wonke amaphupho akho wobuntwana afezeka. Umhlaba weWalt Disney uyaphila, ezikhangayo ezimangalisayo, nemibukiso efana ne-labyrinth ka-Alice nombukiso we-4D kaMickey.
Unganweba lo mlingo ngempelasonto yonke, futhi uhlale emahhotela akwaDisney, noma amahhotela ozakwethu ahamba ngesikebhe samahhala kude neDisneyland.
Ungafika Kanjani kuDisneyland?
IDisneyland ilungile 20 imizuzu kude neParis. Ungafika lapha ngqo kusuka esikhumulweni sezindiza saseParis, noma isiteshi sesitimela saseMarne-la-Vallee / Chessy.
3. IViennese Prater Theme Park E-Austria
IPrater Wien yipaki yetimu ehamba phambili e-Austria, nenye ye 10 amapaki wetimu amahle kakhulu eYurophu. Umndeni wakho uzoba nesikhathi esimangazayo kuma-rollercoasters amaningi asendle, nokuheha okungokoqobo okubonakalayo, njengoDkt. U-Archibald.
Ngaphezu kwalokho, kunezinqola zokuhamba, izinqaba ezihaunted, futhi ngaphezulu kwakho konke, isondo elikhulu iFerris e-Austria. Leli sondo elikhulu likaFerris livulwa unyaka wonke futhi lingelinye lalo Izimpawu zomhlaba eziphezulu zaseVienna.
Ungafika Kanjani ePrater Theme Park yaseVienna?
Umdidiyeli iphaki lokuzilibazisa itholakala esifundeni sesibili saseVienna, futhi ungayifinyelela ngetekisi noma ngomgwaqo ongaphansi komhlaba kusukela enkabeni yedolobha.
4. IGardaland Italy
Njengoba ungahle uqagele, IGardaland itholakala eduze neLake Garda e-Italy. Njengepaki yengqikimba etholakala eduze kwamanzi, ipaki yengqikimba yaseGardaland inezimoto eziningi ezimnandi ezihamba emanzini, njengesikebhe seColorado, kanye namahlumela asehlathini.
Ngaphezu kwalokho, iGardaland nayo ine-aquarium yokuphila impilo yasolwandle impela, ka 13 izindawo ezinezihloko, futhi 100 izinhlobo. Akungatshazwa, izingane zakho ngabe ngokuphelele umxhwele ngaphansi kolwandle, futhi ngeke ufune ukuhamba.
Ngokuphambene nalokho, uma ngabe ukhuluma nge-adrenaline, then you’d love the thrilling Blue Tornado rollercoaster.
Ungafika Kanjani eGardaland Theme Park?
Ungathatha isitimela seTrenitalia sisuka eVenice siye esiteshini iPeschiera del Garda, bese u-shuttle waya eGardaland.
Ipaki yetimu ye-Efteling ingenye ye- 10 amapaki wetimu amahle kakhulu eYurophu. Izinganekwane sonke esikhulele kuzo siphila ezikhangisweni ze-Efteling kanye nasehlathini elijabulisayo, kusuka kuHans Christian Andersen kuya kuBazalwane Grimm.
IFata Morgana izokusa eMpumalanga Ekude nasemazweni amaSultan, ngenkathi ama-coasters wamanzi nama-steam coasters azokuthatha ngaphezu kwamaphupho akho amakhulu. Izwe lama-fairies likulindele ukuthola i- isikebhe ride ebumnyameni futhi engaqondakali iDroomvlucht.
Awekho amagama azokwanela ukuchaza umlingo wepaki yetimu ye-Efteling yomndeni wonke, ngakho-ke kufanele umane wenze isikhathi sale paki yetimu eholidini lakho eNetherlands.
Ungafika Kanjani Efteling Theme Park?
Ungathatha isitimela esisuka e-Amsterdam siye e ‘s-Hertogenbosch, bese ubhasi uqonde ngqo epaki yetimu ye-Efteling.
Lapho zonke izinto ezikhangayo zenziwe ngokuphelele nge-lego, le paki yengqikithi ingelinye ipharadesi lezingane. Ipaki yetimu yeLegoland eWindsor yenzelwe izingane ezungeze uhlelo lokudlala lweLego.
Ngakho-ke, yonke i-rollercoaster eyodwa, isikebhe, futhi isitimela sakhiwe ngezingcezu ezinkulu ze-lego. Le paki yengqikimba emangalisayo eNgilandi itholakala eBerkshire futhi kuphela isigamu sehora ukusuka eLondon.
Ungafika Kanjani ELegoland Theme Park EWindsor?
Kufanele uthathe isitimela ukusuka eLondon Paddington uye eWindsor & Eton Central ngokuxhumeka, noma isitimela esiqondile esivela eLondon Waterloo. Khona-ke, kunamabhasi okusuka esiteshini ngasinye sesitimela esiya eLegoland.
Uma kwenzeka ungazi, IParc Asterix isuselwa ochungechungeni lwencwadi yamahlaya edumile ka-Albert Uderzo noRene Goscinny, I-Asterix. Ngakho-ke, duze kwe 2 izivakashi eziyizigidi zijabulela izimangaliso zepaki yesibili enkulu kunazo zonke eFrance. Owokuqala yiDisneyland yemilingo.
Epaki yetimu ye-Asterix ungathola iDiski enkulu futhi ube nesikhathi esihle sokuzulazula, hlangana namahlengethwa nezinye izilwane eVillage Gaulois, futhi-ke jabulela ezinye izinto ezikhangayo.
Ungafika Kanjani Ukuze Upake i-Asterix?
Ipaki yetimu ye-Asterix kuphela 30 imizuzu ukusuka eParis kulayini B esitimeleni seRER sisuka eParis Gare du Nord. Ngemuva kwalokho wehlela eCharles de Gaulle 1 Isikhumulo sezindiza, bese uya eshuttle epaki.
Ukudansa ngamarobhothi, ukuhamba kwesikhathi, bese uhambela i 4 amagumbi omhlaba phezulu, Ipaki yetimu yeFuturoscope iphume kulo mhlaba. Le paki yetimu emangalisayo isendaweni enhle yeNouvelle-Aquitaine eFrance.
I-Futuroscope ihlanganisa okuhehayo kwezinzwa nesayensi futhi kuzoba mnandi kakhulu futhi ube nesipiliyoni semfundo kuwo wonke umndeni.
Ungafika Kanjani Kwi-Futuroscope Theme Park?
Ungafika epaki yetimu ye-Futuroscope engavamile nge-Eurostar iye eLille noma eParis, bese ushintshela ku-TGV.
9. I-Chessington World Of Adventures Theme Park E-UK
IChessington World of Adventures e-UK yipaki enezindikimba ze-safari. Lokhu kusho ukuthi noma yikuphi ukuvakashelwa komndeni epaki lokuzijabulisa eChessington kuphenduka indawo yokuzijabulisa yomndeni ezweni eliyimfihlakalo nelikhangayo lezilwane zasendle nase-Afrika yonkana.
Ngaphezu kokuzijabulisa kwasendle, ungakujabulela ukulala emahhotela anetimu iSafari ne-Azteca, futhi wandise ukuhlala kwakho. Ngakho, uma uthanda ezenzakalweni zasendle, uzoba nesikhathi esimangazayo ukunqamula epaki kubasizi behlathi, Idwala lengwe, nezihlenga zemifula.
I-Chessington world of adventures yenzelwe umndeni omusha, futhi nakanjani uzokuba nesikhathi sempilo yakho.
Ungafika Kanjani E-Chessington World Of Adventures?
Ipaki yetimu yasendle yaseChessington 35 imizuzu ukusuka enkabeni yeLondon ngesitimela. Ngakho, ungathatha ujantshi weSouth-Western ukusuka eWaterloo uye esiteshini saseChessington South.
10. I-Fantasialand Theme Park EJalimane
E-Fantasialand zonke izinganekwane zezingane ziyagcwaliseka 6 imihlaba ebabazekayo. Kuwo wonke umhlaba, ungakujabulela ukugibela okuvusa amadlingozi kakhulu, nokukhanya kokukhanya nombala.
Ngakho, yini eyenza iFantasialand enye yamapaki wetimu amahle kakhulu eYurophu? Idolobha laseChina, Mexico, Afrika, Berlin, Idolobha laseWuze, imfihlakalo umbuso, naseRookburgh, ngokuheha okumangazayo kuwo wonke umhlaba. Kusuka kuMnyama Mamba kuye eTaron edumile, lokhu kugibela kuzokuphephetha.
Ungafika Kanjani kuFantasialand?
Ungathatha i-shuttle esiteshini sesitimela saseBruhl. Fantasialand itholakala Bruhl, imizuzu engu-2o nje ukusuka eCologne.
Ukufingqa lokhu kumnandi, Izingqondo ezigqame kakhulu zaseYurophu zidale amapaki wezindikimba amangalisa kakhulu emhlabeni. Noma ngabe uhamba nezingane ezisacathula noma uthatha izingane ezindala ukuzozijabulisa, le 10 amapaki wetimu amahle kakhulu ohlwini lwethu anokuheha okungcono kakhulu kuyo yonke iminyaka.
Lapha e-Gcina Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo lwakho oluya e- “10 Kuhle Theme Amapaki EYurophu”.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Amapaki Ayizihloko Ahamba Phambili Ase-10 EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-theme-parks-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
BestthemeparksEurope Familytripeurope OutdoorActivities themepark ThemeParks Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traintraveleurope